वीरगञ्जमा उपचारको क्रममा बारा, रौतहट र सर्लाहीका ३ कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु - KalaiyaOnline.Com
वीरगञ्जमा आइतबार कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण ३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यहाँस्थित नारायणी अस्पतालमा उपचार गराई रहेका बारा, रौतहट र सर्लाहीका १/१ जना गरी ३ जना पुरुषले ज्यान गुमाएका हुन् ।
अस्पतालका कोभिड संयोजक डा. उदय नारायण सिंहका अनुसार ज्यान गुमाउनेमा रौतहटको देवाही गोनाई नगरपालिका वडा नम्बर ६ निवासी ५५ वर्षीय पुरुष रहेका छन् । जेठ १३ गते गौर अस्पतालमा कोरोना पोजेटिभ भएर भर्ना भएका उनलाई थप उपचारका लागि जेठ २९ गते नारायणी अस्पताल ल्याइएको थियो । उनको आइतबार बिहान सवा १२ बजे मृत्यु भएको डा. सिंहले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी सर्लाहीको इश्वरपुर वडा नम्बर २ का ६४ वर्षीय पुरुषको पनि कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ । जेठ २२ गते अस्पताल भर्ना भएका उनको उपचारको क्रममा आइतबार बिहान साढे ५ बजे मृत्यु भएको थियो । उनि गम्भीर किसीमको निमोनियाबाट सङ्क्रमित थिए ।
त्यस्तै बाराको जितपुरसिमा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २४ हरपुर बस्ने ६५ वर्षीय पुरुषको पनि कोरोनाबाट ज्यान गएको छ । नारायणी अस्पतालमा उपचारका लागि जेठ २७ गते भर्ना भएका उनको आइतबार बिहान १२ बजे मृत्यु भएको डा. सिंहले बताए । गम्भीर किसिमको निमोनियाबाट सङ्क्रमित उनि मधुमेह रोगी पनि थिए । मृत्यु भएका कसैलेपनि कोरोना विरुद्धको खोप नलिएको डा. सिंहले बताए ।
मधेश बिशेष, मुख्य समाचार
Bara, Corona, Rautahat, Sarlahi
सर्वोच्चद्वारा माओवादीले कारबाही गरेका जनप्रतिनिधिलाई पुनवर्हाली गर्न अन्तरिम आदेश
मौलापुर नगरपालिकाले ल्यायो ३६ करोड ६ लाखको बजेट